Caalamka oo ka fal celiyey afgembigii militariga Sudan xilka uga tuureen al-Bashiir… – Hagaag.com
Caalamka oo ka fal celiyey afgembigii militariga Sudan xilka uga tuureen al-Bashiir…
Wadamada caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay afgambigii shalay milatariga Sudan xilka uga tuureen madaxweynihii mudada dheer soo maamulayay ee Cumar Xasan Al-Bashiir.
Wasaarada Arimaha dibeda Masar ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in ay taageerayaan xilka qaadista Al-Bashiir oo ay ku sheegeen in ay aheyd xulashada Shacabka.
Masar ayaa dhanka kale kalsooni ka muujisay in Milatariga dalka ay daris wadaaga yihiin uu la imaan doono Isbadal ka hor inta aysan Suudaan helin caawimaad caalami ah si loo helo Xukuumad la wareegta Talada.
Dowladaha Qaahira iyo Khartuum ayaa waxaa u dhaxeeyay xiriir aan wanaagsaneyn kadib markii Suudaan ay taageertay qorshaha itoobiya ay biyo xireenka ugu sameyneysay wabiga Nile,oo halis galin kara nolosha Shacabka Masar oo ku tiirsan.
Madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyib Erdogan ayaa dhankiisa sheegay in uu rajeynayo siyaasad nabad ku dheehan iyadoo loo marayo wadahadal qaran,waxuuna ku booriyay dadka reer Suudaan in si wadajir ah oo dimuquraadiyad ah ay u Shaqeeyaan.
Erdogan oo horay dalkiisa ugu marti galiyay Al-Bashiir ayaa ka difaacay eedo loo jeediyay oo ku saleysan tacadi Bani Aadanimo.
Isaga oo u jawaab celinayay maxkmada ICC ayuu sheegay in Muslimka uusan aheyn mid Xadgudba.
Dagaalo ka dhacay gobolka Daafuur ayaa wadamada reer galbeedka ku eedeeyeen sanadkii 2009-kii in xasuuq ay ka geysatay dowlada Suudaan shacab aan waxba Galabsan.
Xoghayaha wasaarada Arimaha Dibeda UK Jeremy Hunt ayaa tilmaamay laba sano oo xukun milatari ah aysan jawaab u noqon karin isbadal ka dhaca Suudaan.
Dowlada Mareykanka ayaa ugu baaqday Milatariga in uu la shaqeeyo dadka rayidka si loo helo dowlad badasha xukunkii Bashiir, waxaana uu tilmaamay in 2 sano oo xukun Milatari ay tahay mudo Dheer.
Madaxa dalalka Midowga Afrika Moussa Faki Mahamat ayaa cambaareyay afgambiga xilka looga tuuray Al-Bashiir, balse waxuu ku booriyay asxaabta siyaasada in ay xoojiyaan in wadahadal nabadeed loo helo xukun Dowladeed.
Wadamada Midowga Yurub 28ka dal ee ku bahoobay ayaa sheegay in xukunka uu la wareegay Milatariga aysan ka tarjumeyn wax ka qabashada qalaalasaha siyaasadeed ee ka taagan Suudaan.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasada Suudaan in hanaan ku saleysan dimuquraadiyada ay u maraan Dowladnimada.